Everchọtụla ịmalite blọgụ nke gị? Ma ọ bụ, вече nweela блог ị na-ejighi n’aka etu ị ga-esi ruo ọkwa nke ọzọ?
Ọ bụrụ na azịza gị bụ "ее" mgbe ahụ peeji a bụ ebe ị kwesịrị ịdị.
1 Изи 1. 1. Блог на Scratch
1.1 1. Họrọ ezigbo уеб хост на aha ngalaba
1.1.2 Bochum Weebụ – Ebee ka a ga-esi wezie Блог gị
1.1.3 Блог Akwadoro nke akwadoro maka Новаците
1.3 3. Wụnye WordPress на уеб хост gị
1.5.3 Ngwa mgbakwunye maka arụmọrụ блог kachasị mma
2.1 Otu esi ahọrọ ниша ịde blọgụ ziri ezi?
3.4 4. блог Ikwu
3.5 5. Ajụjụ платформа Q&А
4 Наистина 7. Iji Blogde blọgụ Efu
4.2 Едези есерезе
4.3 Foto Foto на Foto Onwere Onwe
4.5 Социални медии, Ahịa & SEO
Ezubere M Bochum Nzuzo Wepụta (WHSR) на 2008 г., за да се провери akkkụ nke nnabata nnabata ịde blọgụ anyị ji ike gaa ike. Kemgbe ahụ, WHSR etolitela ghọrọ otu n’ime saịtị ndị isi na Net maka ndụmọdụ ntanetị, ma adọtala m ka ha mata ụfọdụ olu siri ike na ịde blọgụ nke oge a – ha niile azụhụt n’imeọ n niny nị’ n n nọ n , na-eme ọ bụ ihe a ga-eji nweta onye ọ bụla nke na-ebido ịga ebe ịde blọgụ nke onwe.
Site Na ntuziaka enweghị nzuzu а, м жа – ewetara GI ụfọdụ ngwa ngwa, nghọta ди MFE nghọta Na Кария ụzọ ди ВМА Maka nsogbu IDE blọgụ GI – sitere Na ahụmịhe NKE М Na n’uche НДИ mmadụ па-Ану ХЕИ ха па-ЕМЕ.
My ode akw akkwọ profaịlụ na Problogger.net – M na-ebipụta oge niile na ọtụtụ saịtị ndu blogger dị elu n’etiti 2015 – 2018.
Изи 1. 1. Блог на Scratch
Ọ dị mfe ma dịkwa ọnụ ala ịmalite blọgụ на 2020 г..
Akụrụngwa ịde blọgụ kachasị ewu ewu, WordPress.org, bụ n’efu. Amakacha amara emepe emepe WordPress на плъгини bụ n’efu. Ma enwere ọtụtụ nde nkuzi n’efu na-amalite gị (gụnyere nke a). Naanị ihe ị ga – eri bụ ịmalite blọọgụ bụ его ị na – akwụ maka onye webụsaịtị na aha ngalaba.
O doro anya, ọ nwere ike nweta oke aghụghọ na emesịa ogbo; mana n’otu mgbe, ọde blọgụ nwere ike ime onye ọ bụla nwere kọmputa na Internetntanetị. N’ezie ị nwere ike ịmepụta blog n’ezie ma mee ka ọ na-agba ọsọ na nkeji 20 na-esote. Nzọụkwụ ndị a kpọtụrụ aha na usoro ndị a bụ kpọmkwem otu m si emepụta blọọgụ m na mbido.
Họrọ ezigbo уеб-домакин на aha ngalaba
Wụnye WordPress на уеб хост gị ọhụụ (dị mfe iji ihe nrụnye akpaaka).
Ма … nke ahụ niile.
Easyda mfe? Заложете nzọ!
M ga-eje ije gị n’okpuru ebe a. Na-eche безплатно iji ọ bụrụ na ị marala etu esi ahazi blog nke gị.
1. Họrọ ezigbo уеб хост на aha ngalaba
Iji bido блог gbara onwe gị,-ga-ebu ụzọ chọọ ngalaba aha na akaụntụ nnabata web.
Ngalaba gị bụ aha blog gị. Ọ bụghị ihe anụ ahụ ị nwere ike imetụ ma ọ bụ hụ; kama ọ bụ ụdị mkpụrụedemede na-enye weebụsaịtị gị aka ịmata – dị ka aha akwụkwọ ma ọ bụ ebe. Ngalaba gị na – agwa ‘ndị ọbịa’ ụdị блог ha na – eleta.
Вие не сте аз ịhọrọ ma denye aha ngalaba gị site na ngalaba na-edeba aha. GoDaddy, AhaCheap, Hover, na Domain.com bụ ụfọdụ n’ime ndị na – edebanye aha ndị ama ama na ahịa.
Rịba ama na ọ dị mkpa ịdebanye aha ngalaba na onye na-elekọta weebụ gị. Naanị n’ihi na onye na-elekọta weebụ gị na-enye ngalaba n’efu anaghị apụta na ị kwesịrị ikwe ka ụlọ ọrụ Bochum na-achịkwa aha ngalaba gị. Onwe m, ana m eji NameCheap jikwaa aha ndebanye aha ngalaba m; mana ndị ọzọ na-edeba aha ngalaba aha kwesịrị ịdị mma. Site n’ime nke a, enwere m ike ịgbanwe ngalaba ngalaba DNS m oge ọ bụla achọrọ m ma zere ịbụ onye akpọchiri m otu web host otu. Ana m akwadosi gị ike ime otu ihe ahụ maka nchebe gị.
Bochum Weebụ – Ebee ka a ga-esi wezie Блог gị
скорост – needchọrọ onye nnabata nke na – ebu ngwa ngwa n’ihi na ọsọ na-emetụta ahụmịhe onye ọrụ na ogo ọchụchọ.
Ịnye ọnụahịa – Бохум на <$ 5 / mo bu ezigbo mmalite, ichoghi oru ego di elu na ogbo a.
Име ụlọ na-eto – ще ga – achọ nkwalite ndị ọbịa (atụmatụ ndị ọzọ, ikike sava ndị ọzọ, wdg) ka blọọgụ gị na – eto.
nkwado – Тогаватанетta na-agbanwe agbanwe mgbe niile, ọ dị mma mgbe niile ịnwe onye nyere gị nkwado n’akụkụ ọrụaka.
Блог Akwadoro nke akwadoro maka Новаците
Nlekọta blọọgụ abụọ na InMotion Bochum maka $ 3,99 / мес.
Alele bụ otu n’ime web host web dị ọnụ ala karịa, ọkachasị n’oge nnabata afọ ezumike nka. N’agbanyeghị ịbụ ụlọ ọrụ Bochum mmefu его, Hostinger na-enye ọtụtụ atụmatụ atụmatụ Bochum dị mma maka ndị na-ede blọgụ.
SiteGround na-akwụ ụgwọ $ 3,95 / блог maka otu.
Ọzọ, ịkwesịrị imelite ndekọ DNS на ngalaba aha na-edeba aha (ebe ị debanyere aha ngalaba gị na nzọụkwụ # 1) na-arụtụ aka na sava weebụ gị (InMotion Hosting, Hostinger ma ọ bụ SiteGround).
DNS guzoro na ngalaba Aha Sistem ma a na-eji ya eduzi onye ọrụ ọ bụla na-abata kwupụta adreesị IP nke sava ahụ. Yabụ, mgbe onye ọrụ batara “WebHostingSecretRevealed.net” ihe ndekọ DNS ga-ebugote adreesị IP nke onye web m ma jeere onye ọrụ m saịtị ahụ.
Ihe Nlereanya: Itinye известен също като уебсайт на InMotion Hostingerer на GoDaddy.
Nke a bụ ntuziaka usoro maka iji melite blog blog gị na GoDaddy или Namecheap.
3. Wụnye WordPress на уеб хост gị
Iji malite ịde blọgụ site na iji WordPress ị ga-ebu ụzọ wụnye systemụ ahụ n’ime onye na-elekọta weebụ gị. Enwere ike iji nke a mee nke a, ma ọ bụ iji ngwa nwụnye otu ngwa-ngwa. Methodszọ abụọ a dị mfe nfe ma enwere ike ịme ya ngwa ngwa.
Наистина nbwa, ebe a bụ usoro ịkwesiri ịme:
Mepụta nchekwa data maka WordPress na sava weebụ gị, yana onye ọrụ MySQL nke nwere ihe ùgwù niile maka ịnweta ma gbanwee ya.
Mepee wp-config.php на edede edede (бележник) ma jupụta nkọwa data nchekwa data gị.
Tinye faịlụ WordPress на ọnọdụ achọrọ na sava weebụ gị.
Gbaa akwụkwọ edemede WordPress ahụ site na ịnweta wp-admin / install.php na ihe nchọgharị weebụ gị. Ọ bụrụ na ị wụnye WordPress на ndekọ ndekọ,-ga-aga: http://example.com/wp-admin/install.php; ọ bụrụ на и tinyere WordPress на вас, ние сте на-akpọ блог, dịka ọmụmaatụ,-ga-aga: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
Сайт на nkwado nke ọrụ ntinye ọpịpị dịka Softaculous na Mojo Market Place (ọ dabere na nke web host ị na-eji), usoro nrụnye dị ezi n’iru ma enwere ike ịme ya na ole na ole dị mfe.
Maka ntụaka gị, ihe onyonyo ndị a na-egosi ebe ị nwere ike ịchọta njikwa nwụnye akpaaka gị табло. Iji wụnye WordPress, dị nnọọ pịa akara ngosi gbara gburugburu ma soro ntuziaka akaebe zuru oke – системаụ WordPress gị kwesịrị ịdị na-arụ ọrụ na erughị nkeji ise.
Ihe Nlereanya: може да има ike iwunye WordPress on-elekọta weebụ gị naanị ole na ole na iji iji Hostinger Auto Installer (Гаа на Hostinger ebe a).
Ihe nwere ike ịdị iche maka ndị web na-ahụ maka weebụ mana usoro a bụ otu. Я просто nwutela ma o buru na i jighi otu ndi agha a m na e gosi n’ebe a.
Всичко е на WordPress, ако използваме новобранци. Имайте най-добрите сайтове на Wuru Na, и ще вземете 95% nke bl Unitedgụ за Съединените щати, които могат да се справят с WordPress. Наистина, най-вече няма 27 дни в WordPress.
Ozugbo itinyela systemụ WordPress gị, a ga-enye gị URL адрес на ịbanye na ibe nchịkwa WordPress gị. N’ọtụtụ oge, URL адрес ahụ ga – abụ ihe dị ka nke a (be да се слагате в folda ị wụnyere на WordPress):
Gaa URL a wee banye aha njirimara na paswọọdụ gị site n’ebe ahụ, ị ​​ga-anọ ugbua na njedebe (табло) nke saịtị WordPress gị – nke a bụ akụkụ nke blog ebe naanị gị dịka onye nchịkwa nwere ike.
Mepụta блог ọhụrụ на WordPress Gutenberg ọhụrụ.
WordPressdị WordPress kachasị ọhụrụ n’oge eldere bụ ụdị 5.3.2 – на ndabara ka ị ga-eji WordPress Gutenberg dị ka onye edemede eldere. Гутенберг на eweta mgbanwe dị ukwuu на nyiwe WordPress. Nke a bara uru maka ndị mbido ebe ọ bụ na ọtụtụ ihe dị ka ịtọlite ​​ụla n’azụ na ihe ndị ọzọ anaghị achọ ụkọ. Usoro ngọngọ na-enyere aka na njikwa okirikiri eldere.
Iji dee ma bipụta ọkwá ọhụrụ, gọọgharịa gaa n’akụkụ aka ekpe, pịa „Публикации“> ‘Tinye Nkọwa’ na ị ga-eduzi na ngere endede. Pịa „Визуализация“ ka ị hụcha ihe ihe dị na njedebe (ihe ndị na-agụ gị ga-ahụ), pịa „Bipụta“ ozugbo oge zuru ezu.
Здравей! Сега bipụtara akwụkwọ блог mbụ gị.
Nke a bụ ebe ị nwere ike ịnweta isiokwu WordPress n’efu. Eidde edepụtara na akwụkwọ ndekọ a na-agbaso ụkpụrụ siri ike nke ndị mmepe WordPress nyere, ya просто, n’echiche m, nke a bụ ebe kachasị mma iji nweta atụmatụ isiokwu adịghị mma.
Zọ ọzọ ị ga-esi nweta isiokwu dị elu nke a na-akwụ ụgwọ bụ ịdenye aha na Clubs Club WordPress.
Ọ bụrụ na nke a bụ oge mbụ ị nụrụ banyere klọb Okwu egwuregwu, lee ka o si arụ ọrụ: You na-akwụ ego ole iji sonyere klọb ahụ, ị ​​na-enwetakwa atụmatụ dị iche iche enybere. A na-ahazi usoro ngosi enyere na klọbgụ Тема.
мара Gburugburu, Studio Press, най-добре да се свържете с WordPress Gburugburu klọb m nwere ike ikwu.
Гаа на: StudioPress.com. Ahịa: $ 129.95 / isiokwu ma ọ bụ $ 499.95 / ndụ
Bụrụ na ị bụ onye ọrụ WordPress oge, mgbe ahụ, ị ​​nụla banyere StudioPress. Направете нова рамка на Jenesis, но минималистична информация за SEO-еня на WordPress kpuchie niile StudioPress gburugburu.
StudioPress na-enye ọnụahịa mgbanwe dịka mkpa gị. Okpokoro Genesis на isiokwu nwata nwere maka ugwo ugwo nke $ 59.99. Ihe kachasị mkpa, nke gụnyere Igodo Jenesis, na-efu $ 99 ọ bụla. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịnweta niile gburugburu, i nwere ike ịkwụ ụgwọ $ 499.
Njikere просто saịtị ndị Artisan Theme nyere.
Ngwa mgbakwunye maka arụmọrụ блог kachasị mma
Блог на njikarịcha arụmọrụ. W3 Общ кеш на Nrụ ọrụ ọsọ ọsọ bụ nhọrọ kachasị ewu ewu.
Ihe mgbakwunye arụmọrụ abụọ ndị ọzọ ị kwesịrị ịlele Igwe ọkụ, на WP Super Cache. Cloud Flare bụ ngwa mgbakwunye nke ụlọ ọrụ CDN nyere, Cloud Flare; ebe WP Super Cache мейп-сайт на Donncha на Automattic, ,lọ ọrụ mepụtara ma na-arụ ọrụ WordPress ugbu a.
Ihe mgbakwunye mkpọchi bu ihe kwesiri ntaneti na ụwa ịde blọgụ ọgbara ọhụrụ – ọ na – eme ka ahụmịhe onye ọrụ dị mma site na ịbawanye arụmọrụ sava ahụ, belata os eeta geeta.
Bụrụ na blọọgụ gị nwere ọtụtụ onyonyo dị na ya – tulee itinye EWWW Image Optimizer. Ọ bụ otu njikarịcha ihe oyiyi na-eme ka enwee ike iwepụta ihe eserese onyonyo nke ọbá akwụkwọ gị. O nwekwara njiri aka na-egosipụta mkpirisi onyonyo iji belata ogo onyonyo mgbe ị na-ebugote ha. Site na iji eserese kachasị mma, ị nwere ike belata oge ibu peeji ma rụpụta arụmọrụ saịtị ngwa ngwa.
Сайт на ntinye nke Gutenberg nchịkọta akụkọ na WordPress 5.0, ndị na-ede blọgụ nwere ike ịmepụta ọdịnaya ugbu a site na iji nchịkọta akụkọ na-egbochi ngọngọ. Сайт на ndabara, WordPress na-enye setịpụrụ ngọngọ ọdịnaya dịka paragraf, eserese, bọtịnụ ịkpọ oku na-eme, koodu mkpirisi, na ndị ọzọ. Сайт на ịgbakwunye на плъгини Gutenberg, ị ga – agbakwunye ihe ndị ọzọ na – etinye aka (dịka ọmụmaatụ – FAQ, акордеон, profaịlụ edemede, въртележка, pịa-to-tweets, GIF блокове, wdg) на блог g na.
Подреждащи се, Ultimate Blocks, на CoBlocks и най-добрите плъгини на Gutenberg Block на-akwụghị ụgwọ ịnwale.
Nke a bụ nke ọhụụ dịka newbie na-amalite blọọgụ: ha ga-ede banyere ọrụ ha na Mọnde, ihe omume ntụrụndụ във вторник, fim ha lere na Wednesde, na echiche ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ngwụsị. Na nkenke, ndị a na-ede edede na isiokwu dị iche iche n’ejighị isi okwu ọ bụla.
O siri ike inwe ọnụ ọgụgụ dị mkpa nke ndị na – agụ akwụkwọ na – eguzosi ike n’ihe mgbe ị na – ede blọgụ na – akpaghị aka n’ihi na ndị mmadụ agaghị ama ma ọ bụrụ na ị naki akki ma ọ bụ akwụkwọ na – akatọ akwụkwọ. Ndị na-akpọsa ngwá ahịa ga-achọkwa ịkpọsa gị maka na ha amaghị ihe ị bụ. Iji wuo blog na-aga nke ọma, ịkwesịrị ịchọta ниша.
Otu esi ahọrọ ниша ịde blọgụ ziri ezi?
Iji chọta nging ịde blọgụ ziri ezi, ebe a bụ isi ihe ị ga-atụle.
Ọ bụrụ na ọ dịtụla mgbe ị chere "M ga-achọ ka mmadụ dee blog banyere ya", nke ahụ bụgege a-ha. Ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ịchọrọ ịmatakwu banyere, mgbe ahụ, ọ ga-abụ isiokwu nke ndị ọzọ chọrọ ịma.
Cheta na ị ga-ede akwụkwọ, ịgụ ma na-ekwurịta okwu gị kwa ụbọchị maka afọ ole na ole sochirinụ. Blog bụrụ na ịnweghị mmasị na isiokwu blog gị, ọ ga-esiri gị ike ijisi gburugburu mgbe niile.
Ọ bụ ezie na esemokwu dị ukwuu, ọ gaghị eme ka okwu gị bụrụ ebe a n’izu na-esonụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ị nwere nnọọ mmasị na Vine ma malite na blog dabere na ya, mgbe nke ahụ daa na ejiji ị ga-abụ nke ọdịnaya. Ọ ka mma ka ị lekwasị anya n’inwekwu okwu n’ozuzu, dịka "ịmepụta mgbasa отношение mgbasa отношение ọha na eze" ma ọ bụ "ngwa ọdịyo dị egwu". N’ụzọ dị otú a, ọ bụrụ na ụda daa na ejiji, blog gị ka nwere ike ịnọgide na-ele anya maka ihe ọ bụla na-agbanwe ya.
Gị блог kwesịrị ịdị ниша на i nwere ike име его.
Jụọ onwe gị ma ọ bụrụ na ọ bụ isiokwu ga-adọta ndị na-agụ akwụkwọ ma mepụta его – ma ọ bụ site na mgbasa ozi ma ọ bụ ahịa. Ọ bụrụ na ị na – ede blọgụ iji kwado azụmahịa gị dị, blọọgụ ọ na – ebute ndị ahịa ọhụrụ? Ọ bụrụ na ị na-ede blọgụ naanị n’ihi na we nwere mmasị na isiokwu ahụ, enwere ụzọ ị ga-esi tinye blog nke gị n’otu n’otu?
M na-eji SpyFu, ngwa mgbasa ozi nke Pinye aka-na Pịa aka ọrụ, iji tụta uru ọghọm bara uru mgbe ụfọdụ. Echiche m n’azụ nke a – ọ bụrụ na ndị mgbasa отношение na-akwụ puku kwuru puku dollar na Google Adwords, ọ ga-enwerịrị его ị ga-eme n’ubi a. Lee ihe atụ abụọ m chọtara:
Ihe Nlereanya # 1: Nke a bụ stats mgbasa ozi maka onye na-emepụta ihe eji eme egwuregwu (na-eche ụdị egwuregwu dịka Adidas ma ọ bụ Nleba Ọhụrụ mana ntakịrị). Получавайте $ 100 000 kwa ọnwa за Adwords dy ka Spyfu.
Ihe Nlereanya # 2: Nke a bụ mgbasa ozi mgbasa ozi maka onye na-eweta ngwanrọ IT. Имате 20 ndị ọzọ nnukwu egwuregwu в ниша a. Lọ ọrụ a, karịsịa, mgbasa отношение azụtara на mkpokọta 3,846 на Google ma jiri ihe dị ka $ 60 000 kwa ọnwa.
Eziokwu dị mwute nke ọtụtụ ndị na – ede blọgụ nọ na ya ọ wasla ọtụtụ oge iji wulite akwụkwọ ha. Получаване на nyota puku peeji mbụ ha nwere ike бяха ọnwa, ụfọdụ blọọgụ ọkacha mara ọfụma na-abịabakwa ebe ahụ.
Ndị mmadụ na-eriju afọ na mmelite mgbasa отношение nke mgbasa отношение, ndepụta отношение ọma, отношение ịntanetị, na ụdị mgbasa отношение dị iche iche. Ọ na-esikwu ike ime ka ndị mmadụ gụọ ọdịnaya gị. Agbanyeghị, ị ka nwere ike ịme nke ọma ma ọ bụrụ na ịmara onye bụ ndị na – ege gị ntị bụ na ihe ha na – achọ. Chee echiche banyere oghere dị na niche gị, ụdị ọdịnaya adịghị efu na otu ị ga – esi weta ndị na – ege gị ntị uru.
Jiri ngwaọrụ mgbasa отношение na-elekọta mmadụ iji soro ihe na-aga nke ọma в социалните медии. N’ebe dị otú a, ị nwere ike iwepụta echiche ọdịnaya nke na-enweta ezigbo nzaghachi сайт na mgbasa отношение mgbasa ozi.
Jiri ngwa nyocha okwu iji chọpụta isiokwu ụfọdụ ndị mmadụ na-achọ n’ime ниша gị. Nwere ike iwepụta ọdịnaya dabere na isiokwu ndị ahụ.
Kwesịrị ịkekọrịta публикации gị ugboro ugboro. Ọ bụrụ n’ịkpọku gị ka ị sonyere bọọdụ Pinterest nke dabara в ниша gị, debanye ma kekọrịta na ịza ajụjụ ugboro ugboro. Ọ bụrụ na i sonyere na ndepụta nke ndị na-ede blọgụ nwere echiche, ọdịmma bụ na ha ga-ekerịta ihe ibe ha oge niile – kwa izu ma ọ bụ kwa ụbọchị. Nke a ga – enyere aka ọgụgụ gị na itinye aka gị.
Jiri nwayọ choose ebo gị – kwụọ ndị ọzọ nọ na ya ụgwọ ma soro ha jikọọ.
Nyere aka na mmemme Twitter. Ikwu na nzaghachi ndi otu ndi ozo. Kekọrịta eldere na akwụkwọ akụkọ gị. Gbakọọ ma kwụghachi ụgwọ blọọgụ ị hụrụ n’anya site na ịgosipụta otu izu ma ọ bụ ọnwa.
Ọ na-ewe m iwe mgbe m chọtara blog nwere isiokwu enwere m obi anụrị naanị ịchọta ọdịnaya ahụ na nnukwu eedinge, paragraf ole na ole, enweghị isi ma ọ bụ mgbọ na obere mkpụrụ okwu. Nke ahụ na-achụpụ m.
N’elu ihe m hụtụrụla n’elu, blọọgụ gị ekwesịghị iji mmapụta na pịa pịa. Кама, бяха все пак gosi nd – na – agụ ya ihe ha dere. Mara nsogbu oge ndị na – agụ akwụkwọ gị wee ghọta ihe kpatara ha iji nọrọ na saịtị gị.
Ebuli блог gị сайт на iji isi, sub-isi, isi mgbu, ma ọ bụ ndepụta edepụtara. Nke a na-enyere ọdịnaya gị aka ịhazi ka ahaziri nke ọma.
Блог на Kewaa gị na ngalaba ma ọ bụ paragraf. Mgbidi ederede nwere ike iyi ihe na-emenye ụjọ ma na-eju ndị na-agụ ya anya.
4. блог Ikwu
Gbanyụọ, ịza ajụjụ na blọọgụ bụ ụzọ kacha eleghara anya maka ewu okporo ụzọ blog – nke kachasị n’ihi na ndị mmadụ na-ackụ ime ka nnabata, mkparịta ụka bara uru na ndị bịara abịa Agbanyeghị, ịza ajụjụ banyere blọọgụ bụ ụzọ dị mma maka ewu okporo ụzọ na-adịkwa n’efu – enweghị ike ịgbagha nke ahụ!
Dee ezigbo nkọwa mgbe niile. Ọ bụrụ na ịnweghị ihe bara uru ị gbakwunye na mkparịta ụka ahụ, ahapụla ikwu („Daalụ – nnukwu post“… ha abaghị uru)
Naanị dobe njikọ ebe dabara adaba. Achọgharịla спам, n’agbanyeghị ụdị ọnwale ọ nwere ike ịbụ; ọ ga-agbakwasị gị.
Mgbe iwu ọzọ (ọ bụghị iwu ọla edo, ikekwe), ọ bụrụ na ị hapụ njikọ, enyela URL nke blog gị. Kama nke ahụ, jikọta post nke gị mkpa nke na-agbakwunye uru na post na mkparịta ụka mbụ. Релевантност bụ isi ebe a.
5. Ajụjụ платформа Q&А
Nzukọ na ntanetị na Q&A bụ ebe dị mma ịnweta oche n’ihu ndị na-ege gị ntị nwere mmasị, nwere mmasị. Ihe a bu n’uche nyochaa mkparịta ụka na-aga n’ihu na niche gị ka ị wee chime mgbe ị nwere ihe ga – enyere gị aka ikwu (ma ọ bụghị, ọ bụghị post ọ bụla ga – abụ ohere – mana ụfọdụ ga – еме). Ga-achọ ezigbo onye na-agụ akwụkwọ, dị ka Feedly, iji rụọ ọrụ a.
Mepụta ụfọdụ ọdịnaya omenala metụtara mkparịta ụka na-ekpo ọkụ. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na mmadụ ajụọ otu esi eme koodu .htaccess koodu, ị nwere ike ide nkuzi wee zipu ya na blọọgụ gị – mgbe ahụ, na ngalaba Q&A nke saịtị ahụ, zaa onye chọrọ ya na teaser, jikọ ha na blọọgụ gị. iji nweta koodu na demo zuru ezu. Nsogbu bụ na ọ bụrụ na otu onye jụrụ ajụjụ ahụ, ndị ọzọ nwere otu ajụjụ ahụ – azịza na njikọta okwu gị ga-aga n’ihu na-adụ ha ọdụ ma oge ahụ bịara.
Quora, Klout, на Yahoo! Azịza – ndị a bụ ụzọ atọ kachasị mma nke ikpo okwu Q&А
Mụtakwuo: Choo uzo ozo iji tinye mon blog gi wee gụpụta nke Kevin Muldoon Ọmụmụ ikpe na-ere BloggingTips.com maka $ 60 000.
Наистина 7. Iji Blogde blọgụ Efu
Граматически – Kasị ewu ewu na ntanetị nnyemaaka.
Приложение за Хемингуей – Животът е задълбочен.
Nnwere onwe.to – Gbochie ebe nrụọrụ weebụ na-adọpụ uche ka ị nwee ike lekwasị anya n’ide edede.
Canva – Chepụta ọmarịcha ihe onyonyo na nke mgbasa отношение mgbasa ozi.
Pixlr – Ntanetị edede.
Foto Foto на Foto Onwere Onwe
Onye Nchyeta Icon – Akwụkwọ ndekọ akara ngosi buru ibu.
Akwụkwọ Eziokwu nke Ụwa – Enweghị ochi egwu – отношение ụwa ozugbo sitere в ЦРУ.
Ihe okike ide ihe – Echiche na kpaliri iji merie engede mgbochi.
Сигнали Google – Nweta ozi ịntanetị dị njikere na ọdịnaya ọhụrụ ị na-achọ.
Социални медии, Ahịa & SEO
Ngwá Ọrụ Webmaster Google – Ngwá yorụ nyocha saịtị n’efu nke Google.
Залив Na-aga -Azụ ahịa, ire & ngwa ọrụ akpaaka
Tweet Deck – Ijikwa otutu akaụntụ Twitter n’otu табло.
IFTTT – Mbipụta ọdịnaya na nyiwe mgbasa отношение ọtụtụ mmadụ na-adị mfe.
Google Analytics – статистика в мрежата.
Nchịkọta YouTube – Статистика за vidiyo YouTube gị.
WP статистика – блог на TPlee WordPress gị na ndị ọzọ.
Nnyocha Ule – Lelee ọsọ уеб страница zuru ezu.
GT Metrix – Nwalee ma soro webpage loading ọsọ n’ụzọ zuru ezu.
Ego ole echere ka ịmalite blọọgụ gụnyere aha ngalaba na nnabata weebụ dị n’okpuru $ 100 kwa afọ (erughị $ 10 kwa ọnwa). Ọnụ его a dabere na blọọgụ ejiri aka gị (iji WordPress). Nkwụsị nke ụgwọ ahụ ga-abụ: $ 15 kwa afọ maka aha ngalaba .com на ihe dịka $ 60 kwa afọ maka ego nnabata web.
Iji nweta ezigbo foto maka otu esi akwụ ndị na-ede blọgụ ụgwọ, edepụtara m ha na ụdị 2 – otu bụ ebe ị na-emeso ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa ozi ozugbo ebe nke kezọ ụọọọọbeụbeonybebeụbeụ bụ netwọk nyere.
Mgbe gị na ndị ahịa ma ọ bụ ndị mgbasa отношение na-emekọrịta ihe,-na-enwe ike ijikwa ọnụahịa ahụ. Намерете сайт за его на:
– Директна mgbasa отношение
– bọọdụ Йов
– Eldere на biputere постове nkwado
3. Ka ịmalite блог n’efu?
Насладете се на най-добрия ebe и на другия блог efu taa, nke a WordPress.com, Tumblr ma ọ bụ Blogger. Iji mepụta blog n’efu, ihe ị ga – eme bụ ịdebanye aha ma ị nwere ike ịmalite ibipụta ọdịnaya gị.
– Aha ngalaba nke blọọgụ gị ka ọ bụrụ поддомейн dịka „myblogname.wordpress.com“ ma ọ bụ „myblogname.tumblr.com“
– E nwere obere ọrụ, плъгини на nhọrọ isiokwu ị nwere ike ịme blọọgụ gị
– Ụtụtụ mgbe, ikpo okwu anaghị akwụ ụgwọ iji gbochie блог gị
Ana m atụ aro ka ị malite blog gị site na iji WordPress.org kwadoro onwe gị (dị ka ihe m kpuchiri na ntuziaka a). E wezụga imeri mmachi nke blog efu, mmụba nke blog gị nwere enweghị njedebe.
Aha ngalaba nke blọọgụ gị ga-abụ subdomain dị ka „myblogname.wordpress.com“ ma ọ bụ „myblogname.tumblr.com“
Enwere obere ọrụ, плъгини на nhọrọ isiokwu ị nwere ike ịme na blog gị
Everchọtụla ịmalite blọgụ nke gị? Ma ọ bụ, juba nweela blogi ị na-ejighi n’aka